Macdanta Sand & Qalabka Jiididda Alaabada - Ellicott Dredges
Macdanta / Ciidda & Quruxda
Markay waxyaabaha sida carada iyo quruuruxa, macdanta, ama dabo-galka ay ka hooseeyaan miiska biyaha ama balliyada haynta, macdanta leh jeex jeex jeex jeexa ayaa ah habka ugu wax ku oolka badan ee lagu helo uguna kaydiya qalabka qalabka warshaddaada.
Nidaamyada qodista culus ee Ellicott waxaa loogu talagalay wax soo saar hufan oo lagu kalsoonaan karo muddada-dheer inta lagu jiro meertada nolosha oo dhan. Milkiilayaasha miinadu waxay si dhow ula shaqeeyaan kooxdeena khubarada qodista kahor iibsiga oo ay taageerayaan Ellicott iyada oo loo marayo rakibaadda qashinka.
Ellicott waxay bixisaa dhowr moodeel hoosaadyo kuwaas oo si fiican ugu habboon mashruuc kasta oo cabbir ah oo laga sameeyo ciidda iyo quruuruxa iyo warshadaha macdanta. Kooxdayada iibinta aqoonta leh ayaa kula shaqeyn doona si loo aqoonsado qaabka ugu habboon baahida mashruucaaga.
Qodista Ciida & Jaajuur
Ka qaadista ciidda iyo quruurux hoosaadka ayaa ah mid ka mid ah isticmaalka ugu caansan ee qodidda. Ciidda & quruurux laga soo saaray badda iyo miinooyinka aan dhulka lahayn ayaa keena warshadaha dhismaha adduunka. Iyadoo aan loo eegin meesha mashruucaagu ku yaal, Ellicott® waxay bixisaa xulashooyin kala duwan oo qalab qodis ah oo laga kala xusho oo ay ka mid yihiin qolal hoos u gooyn kara oo la qaadan karo, qodqodyo jaranjarooyin isdabajoog ah, ama qodis qoto dheer oo si khaas ah loo dhisay iyo baaldiga baaldiga
Ellicott® calaamadaha loo yaqaan 'Ellicott® brand' ayaa loo dhisay inay bixiso ugu dambeyntii naqshad culus oo xamili karta xaaladaha ugu daran iyada oo ay sii fududaan tahay in la qaado. Si kasta oo ay u yartahay ama u yartahay mashruucaaga ciidda & quruuruxu, Ellicott Dredges wuu naqshadayn karaa oo dhisi karaa qashin waqtigiisa iyo miisaaniyad buuxisa shuruudahaaga gaarka ah.
Isticmaalka jajabka waa macne wax ku ool ah oo laga soo saaro ciid, quruurux, Frac Sand, Iron Ore ama Dhuxul Fine Tailings, iyo macdano kale. Si kasta oo ay u daran tahay mashruucaaga macdan qodista Ellicott® wuxuu leeyahay wadiiqo si khaas ah loogu talagalay in lagu buuxiyo shuruudaha. Macdanta leh qodidda waa habka ugu wax ku oolsan ee lagu helo alaab si isdaba joog ah, ha ahaato ciid, quruurux ama kayd cusbo adag.
Dib-u-helidda ama baabi'inta dabo-galka miinada iyada oo loo marayo qodidda waa hawl aasaasi ah oo ka dhigaysa qaar ka mid ah miinooyinka inay si hufan u shaqeeyaan. Codsiyada caadiga ah ee loogu talagalay Ellicottlic nooca loo yaqaan 'Ellicott® brand dredges', ayaa ka mid ah kuwa kale, dhuxusha, macdanta birta, dahabka, iyo qaybaha ciidda saliidda. U adeegsiga qod-soo-celinta dib-u-soo-celinta dabo-galka had iyo jeer waxay leedahay soo-celin wanaagsan oo xagga maalgashiga ah.
Ellicott® waxay leedahay taariikh dhisida qoomamo badan oo loo qaabeyn karo si loo daboolo shuruudaha mashruuca dabo gaar ah ee macaamiisheena. Sanadihii la soo dhaafay, Ellicott® wuxuu u fidiyay macaamiisha Kanada, Dominican Republic, Filibiin, iyo dalal kale oo adduunka ah meela loogu talagalay mashaariicda dabada laga riixo.